Fiatrehana fifidianana: hanohana an-dRajoelina ry Ratsirahonana sy ny miaramila… | NewsMada
Fiatrehana fifidianana: hanohana an-dRajoelina ry Ratsirahonana sy ny miaramila…
Manao ranolava. Anisan’ny resy lahatra hanohana ny kandidà Rajoelina koa ny antoko Avi, tarihin-dRatsirahonana Norbert Lala. “Amin’ny maha goaika antitra sy maha “dinaozoro politika”, miantso anareo tanora aho hanohana sy hiara-dia amin-dRajoelina. Fotoana izao hametrahana ny tanora amin’ny toerany. Manana vina sy vonona ary manana traikefa izy ka mahaiza ianareo tanora mijery”, hoy izy teny Andrainarivo ny asabotsy teo. Nanteriny fa tapa-kevitra ny hanohana ny kandidà laharana faha-13 izy ireo rehefa nandinika amin’ny lafiny rehetra ny momba ireo kandidà 36.
Etsy andaniny, nitodika amin’ireo miketrika ny hanemotra na hanafoana ny fifidianana ity andrarezin’ny fanaovana politika ity.
Paika maloto sy fomba fiady…
Mazava ny hafany. “Paika maloto sy fomba fiady avokoa izany. Hany vahaolana anefa ny fifidianana. Fanajana ny lalàmpanorenana sy ny zon’ny vahoaka izany. Famotehana ny firenena ny tsy hanaovana fifidianana, araka ny voalazan’ny lalàna”, hoy ihany izy. Nanteriny fa tsy misy fifampiraharahana azo atao izany intsony fa efa hiatrika fifidianana izao isika.
Ankoatra izany, tapa-kevitra ary resy lahatra hanohana ny mpanorina ny IEM koa ireo miaramila sy zandary misotro ronono ary ny vady navelan’ny maty (AMRM), araka ny fanambarana nataon’izy ireo tetsy Andrefan’Ambohijanahary ny asabotsy teo, taorian’ny fivoriana natao. “Nanapa-kevitra an-kasahiana izahay fa hiara-dia amin’ny kandidà Rajoelina noho ny fahaiza-mitantana sy ny vina ary ny fahavononana raha mitaha amin’ireo kandidà rehetra”, hoy ny AMRM.